Statmux Waxaa Hadda Lagu Heli Karayaa AWS Elemental MediaLive | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » Featured » Statmux Waxaa Hadda Laga Helay AWS Elemental MediaLive
Statmux Waxaa Hadda Laga Helay AWS Elemental MediaLive
Sida a Amazon Adeegyada Web shirkad, AWS Elemental MediaLive waxay isku daraysaa khibrad fiidiyoow qoto dheer leh awooda iyo cabirka daruuraha si ay u siiso dadka isticmaala adeegsiyada kombuyuutar ee ku saleysan kombiyuutarka ee nimble / dabacsan iyo xalalka gudbinta. AWS Elemental MediaLive waxay u oggolaaneysaa macaamiisha inay si ku habboon u adkeyn karaan xargaha daruuriga markii loo baahdo iyada oo loo adeegsado dalab iyo lacag marka aad adeegayso.
AWS Elemental MediaLive Hada Waxay Bixisaa Statmux
Isku dhufashada Tirakoobka (Statmux) hadda waa la heli karaa AWS Elemental MediaLive, iyo tikniyoolajiyadan khaaska ah waxaa loo isticmaalaa qulqulka qulqulka baahinta ee u qoondeeya bits-ka waqtiga dhabta ah ee kanaalka tooska badan ee tooska ah. Waxa ugu weyn ee ku saabsan Statmux waa in ay sare u qaaddo waxqabadka shabakadda iyada oo ay u wanaajiso tayada sawir ee koox ka mid ah kanaalada inta lagu guda jiro wadarta guud ee go'an. Adeegsiga AWS Elemental MediaLive iyada oo Statmux u oggolaaneyso macaamiisha in ay geeyaan khadinta tooska ah ee fiidiyowga iyo meelaynta gudaha AWS Cloud si loo baahin karo telefishanka, fiilada, ama dhul siinta.
Shirkadaha warbaahinta, sida warbaahinnada qaranka, ayaa asal ahaan ka soo jeeda isla markaana isla mar ahaantaana wadaaggaas u wadaaga lammaanahooda qaybinta. Dhaqan ahaan, tan waxaa lagu dhammeystirey iyada oo loo diyaariyo kanaalno loogu talagalay qaybinta iyadoo la adeegsanayo ujeeddo-dhismeyaal, kumbuyuutarro qalabka guryaha yaallo. Nidaamyadan waxay qaadan karaan bilooyin si loo soo iibsado loona habeeyo. Waxay u baahan yihiin injineer balaaran si ay ugu shaqeeyaan si ku tiirsan, oo dib looma soo celin karo mar haddii la geeyay. Sababtoo ah AWS Elemental MediaLive hadda waxay leedahay Statmux, warbaahinnada iyo bixiyeyaasha sheyga ayaa dhisi kara oo maareyn kara qulqulka fiidiyowga fiidiyowga ah ee adeegyada AWS ee si buuxda loo maareeyay, kaas oo iyaga siiya oo keliya heshiis aad u weyn oo dabacsanaan leh, halka sidoo kale yareynaysa qiimaha qalabka / maareynta, iyo gudbinta sawir tayo sare leh oo la dhisay. - isku halaynta.
AWS Elemental MediaLive iyo Faa'iidooyinka Statmux
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee AWS Elemental MediaLive oo leh Statmux waxaa ka mid ah astaamaha sida.
Tayada fiidiyowga ee Sare
Korjoogteynta iyo Cilmiga
Dabacsanaan daruur: Waxay u oggolaaneysaa isticmaale inuu ku daro, ka saaro, ama cusbooneysiyo kanaalada tooska ah ee ku saleysan beddelka dhageystayaasha iyo baahiyaha ganacsiga. Waxa kale oo ay soo bandhigaysaa kodhyo cusub, oo mudnaanta koowaad siiya sahaminta aaladda kanaalka ah, waxayna u oggolaaneysaa isticmaale si uu uga faa'ideysto codeyaal badan iyo xallinta.
U adkeysiga u-dhisan: Waxay u oggolaaneysaa in kheyraadka si otomaatig ah loogu qoondeeyo aagag badan oo la heli karo si loo helo jaangooyooyin sare oo hagaagsanna loo maareeyo.
Tayada fiidiyowga ee Sare: AWS Elemental MediaLive oo leh Statmux waxay u oggolaaneysaa isticmaaleyaashu inay sare u qaadaan tayada fiidiyowgooda inta ay u fiicnaanayaan meel go'an satellite ama xarkaalka fiilada qaybinta fiilada. Isticmaalayaashu sidoo kale waxay ku hagi karaan jaangooyooyin tayo leh oo ku saleysan kanaal kasta iyada oo aan la carqaladeynin si loo hubiyo in kanaalada mudnaanta u leh ay ilaashadaan tayada ugu sarreysa.
Waxtarka hawlgalka: Waxay gacan ka gaysataa dhisidda rarida qeybinta baahinta baahinta daqiiqado gudahood. Hawshani waxaa lagu dhammeystiraa iyada oo aan la haysan qalabka dhismaha, waxayna u oggolaaneysaa gaarsiinta kanaalada si habsami leh ka badan xaddiga xaddidan ee shabakad go'an.
Korjoogteynta iyo Cilmiga Isku-darka Amazon CloudWatch isku-dhafan wuxuu awood u siinayaa aragtiyaha waqtiga-dhabta ah ee cabbirrada fiidiyowga iyo waxqabadka Multixer.
Cinwaan mideysan: Haysashada hal nidaam oo maareyn kara dhamaan feylka ayaa si weyn u fududayn kara howlaha. Taasi waa meesha madaxa mideysan uu sawirku ka muuqdo, oo tan waxaa u sabab ah xaqiiqda iyada oo Statmux loogu talagalay AWS Elemental MediaLive, waxay ka caawin kartaa bixiyeyaasha waxyaabaha ka kooban qaybinta fiidiyowga caadiga ah ee baahinta iyo sidoo kale khadadka toosan ee multiscreen-ka iyada oo loo maro hal dhisme.
Adeegyada Warbaahinta ee AWS waxay bixisaa adeegyo daruur ah oo awood u siiya hay'ado kala duwan, oo ay ku jiraan warbaahinta iyo shirkadaha madadaalada, shirkadaha, iyo hay'adaha dowladda inay abuuraan qulqulka fiidiyowga heerka kalsoonida-isku-kalsoonaanta ah ee heerka sare ah. Adeegyada Warbaahinta ee "AWS Media" waxaa loo daadgureeyay sidii qayb shaqsiyeed / dhismeyaal dhismeyaal loogu talagalay qulqulka fiidiyoowga ee dhamaadka-dhamaadka-ah, kaas oo asal ahaan ka caawiya bixiyeyaasha fiidiyowga inay kordhiyaan hal-abuurka iyo ka jawaab celinta suuqa, iyada oo si isku mid ah loo kobcinayo wacyigelinta / hawlgalka, iyo in la sii yareeyo wadarta qiimaha lahaanshaha. Qiimaha-sida-go-go ah wuxuu u oggolaanayaa isticmaalaha inuu ballaariyo sameynta fiidiyowga iyo awoodda kaydinta, xawaaraha xawaaraha uu ku yimaado dakhliga, oo uu si fudud u maareyn karo xawaaraha aragtida isagoo aan la maalgelin maal-gashi.
Xalka ka Aws aasaaska u oggolow in telefishanka baahinta loo diyaariyo iyo fiidiyowyo badan oo telefishanka asal ahaan ka soo jeeda isla markaana lagu xayeysiinayo cabbir caalami ah. Tani waxay siineysaa dadka isticmaala awood ay ku kobciso dhaqaale ahaan ugana kobciso howlaha fiidiyowga iyo sidoo kale xorriyadda ay diiradda u saaraan waxa muhiimka u ah awood aad u fudud, ka dib markii loo beddelo fikradaha u gaarka ah waxyaabaha ku kalif kara daawadayaasha.
Teknolojiyadaha hoose ee AWS ka caawiya abuurista qulqul, jajaban oo aamin ah oo ku shaqeeya qulqulka fiidiyowga warbaahinta caalamiga ah, hawl wadeenada TV-yada, barnaamijyada ka kooban barnaamijyada, wargeysyada, hay'adaha dowladda, iyo macaamiisha shirkada ku tiirsan. Soo ogow sida AWS Elemental u buuxiso khibradda warbaahinta iyo la soo xiriir maanta.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida ay macaamiisha u kaydinayaan waqtiga, yareynta dusha sare, kor u qaadida ilaha daruuriga ah ee qiimaha jaban, iyo joogtaynta tayada sawir ee AWS Elemental MediaLive iyo Statmux, ka dibna fiiri aws.amazon.com/medialive/features/statmux.
The Lockerstor 10 Pro: ASUSTOR Inc. ee Qalabka NAS ugu dhakhsaha badan weligiis - January 22, 2020
Amazon Adeegyada Web AWS Cloud Aws aasaaska AWS Elemental MediaLive Broadcast Engineer Broadcast Engineering Dabacsanaanta Daruuraha Caaqilada Cobalt Graham Chapman Prmoted toEditor Statmux kaydinta Ultra HD Forum Video Engineer	2019-12-01
Previous: Injineer dammaanad tayo leh - Heliye Fiidiyooga HLS
Next: Shabakada Howlgallada Shabakada (NOC) Injineer